Uzochukwu | October 2021
Isi > Uzochukwu
cannondale akwụ ụgwọ
Cannondale akwụ ụgwọ - ka esi eme
Ego ole ka Cannondale Lefty bara? All F-Si na-ewu ga-abịa na ọhụrụ Lefty Ocho. E nwere ụdị asaa dị iche iche dị ọnụ ahịa site na $ 2,200 ruo $ 9,000.18 2018.
Cannondale synapse nwa mbido
Cannondale synapse nwa inc - ihe ngwọta dị ire
Cannondale Synapse ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe? Cannondale Synapse 105 Bụ Kachasị Mma $ 2,625 Bi nwere ike ịzụta. Ga-ahụ n'anya ịnya ịnyịnya, yana ọnụahịa dị ala. Ebe a: Synapse bụ igwe kwụ otu ebe maka ndị chọrọ ezigbo igwe kwụ otu ebe, dịkwa mma nke nwekwara ụfọdụ snap na pop nke ụdị agbụrụ.
Nkwado Cannondale - otu esi enweta
Kedụ ka Cannondale si akwado gị? A ga-etinyerịrị akwụkwọ nkwado nkwado anyị niile n'ọnwa Ọgọstụ ruo Ọktọba. Maka ntụle, biko gaa na ndị ahịa Cannondale dị na mpaghara gị. Onye na-ere ahịa mpaghara gị ga-arụ ọrụ na onye nnọchi anya Cannondale maka nnabata.
2017 cannondale synapse
2017 cannondale synapse - ịza ajụjụ ndị a
kannondale igwe kwụ otu ebe
Ugbomumu uzo Cannondale - nzaghachi nye nsogbu a
Ndi igwe ugbo ala Cannondale di nma? Ndi igwe igwe Cannondale di nma? Ee, ịnyịnya ígwè Cannondale dị ezigbo mma. N'agbanyeghị ego ole ị na-emefu, ị ga-enweta igwe kwụ ọtọ ejiri nke a wuru ga-adịgide. N'ezie, ego ga - ewetara gị nkọwapụta dị mma, mana ọbụlagodi ụdị ntinye Cannondale na - eme nke ọma ma ọ bụrụ na ndị na - ege ha ntị lekwasịrị ha anya. 11 2021.
cannondale supersix jiometrị
Cannondale supersix geometry - esi enweta ya
Kedu ihe dị iche na Cannondale SuperSix na SuperSix Evo? Na nsonaazụ, supersix evo nwere ibu dị ala ma e jiri ya tụnyere supersix (rịba ama ọ bụla EVO). Otú ọ dị, nsụgharị na-abụghị evo nwere ma ọkwá dị elu na nkwonkwo ụkwụ. Ihe kariri 20% idi elu karie elu na 4% ntughari uzo karia nke evo. 19 2013.
cannondale wepụrụ ebubo ahịa
Cannondale wepụrụ ọnụahịa - azịza nwere ike ire
Kedu ihe mere Cannondale wepụrụ? Ọnwa ole na ole site na nkwụsị Slate, Cannondale ejiri nwayọ rere ụzọ ya site na ngwaahịa ndị fọdụrụnụ ma lekwasị anya na mbọ ya na ọgbọ igwe na-esote. Slate enweghị mmetụta siri ike ebe a, ka Devine na-ekwu. Ma ọ dịghị bonkers Slate.